राजेन्द्र महतो जी, तपाई नेपाली नै हो र ?
रोजेन्द्र महतो जी नमस्कार । तपाईसँग पटक पटक भेट र गफगाफ त भएकै हुन्, तपाईले मलाई चिन्नुहुन्छ या बिर्सनुभयो, त्यो त मलाई थाहा भएन, तर तपाईलाई म राम्रैसँग चिन्छु । र नेपाली जनताले पनि चिन्छन् । तपाईँ त पटक पटक यो देशको मन्त्री भएको मान्छे । अहिले पनि आपूर्ती मन्त्रालयका कुरा गर्दा तपाईलाई धेरैले सम्झन्छन् । किनकी तपाई र आपूर्ती मन्त्रालय त पर्यावाची जस्तै थिएनी…विस्तृत समाचार »
आफ्नो नागरिक मारिएपछि भारतीय दुताबासको यस्तो विज्ञप्ती
१६, कात्तिक काठमाडौँ । भारतीय दुताबासले बीरगञ्जमा भारतीय नागरिक मारिएको घटनापछि विज्ञप्ति निकालेर घटनाबारे दुःख ब्यक्त गरेको छ । भारतीय निर्दोष नागरिक नेपालमा मारिएको भन्दै दुताबासको विज्ञप्तिमा राजनीतिक प्रकृतिको आन्दोलन बल प्रयोग र दमनबाट समाधान नहुने दोहोर्‍याइएको छ । नेपालमा जारी समस्या नेपाल सरकारले विश्वसनीय र प्रभावकारी ढंगले समाधान गर्ने विश्वास ब्यक्त गर्दै भारतीय दुताबासले सोमबार बीरगञ्जमा भएको घटनाले सीमाक्षेत्रमा रहेको अवरोध झनै लम्बिने संकेत…विस्तृत समाचार »
​वीरगन्जमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू
१६, कात्तिक काठमाडौँ । प्रहरी र आन्दोलकर्मीबिच झडप भएपछि वीरगन्जमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागेको छ । प्रहरीले प्रहार गरेको गोलीबाट एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएपछि स्थिति तनावग्रस्थ बनेको थियो । उनको टाउकोमा गोली लागेको थियो । प्रहरीले वीरगन्ज क्षेत्रको झडपमा प्रहार गरेको रबरको गोली लागि एक दर्जन बढी प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् । प्रदर्शनकारीको ढुंगाबाट एक दर्जन प्रहरी पनि घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । सुरक्षाकर्मीले…विस्तृत समाचार »
​वीरगञ्ज नाकामा तनावः भारतीय भूमीबाट नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगा प्रहार
१६, कात्तिक काठमाडौँ । सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरेर नाका खुलाएको केहि घण्टा बित्न नपाउँदै वीरगञ्ज नाकामा तनाव सुरु भएको छ । प्रहरी र आन्दोलनकारी बिचको झडपपछि वीरगञ्ज–रक्सौल नाका फेरि आन्दोलनकारीले नियन्त्रणमा लिएका छन् । प्रहरीले लखेटेपछि भारतीय भूमि पुगेका आन्दोलनकारी पुन दशगजाको मितेरी पुलमा फर्किएका हुन् । उनीहरुले भारतीय भूमिबाट नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगा प्रहार गरिरहेका छन् । भारतीय प्रहरीको अहसयोगपछि मितेरी पुलमा फेरि आन्दोलनकारी जम्मा…विस्तृत समाचार »
सुन्धाराका डन बाबु घिसिङ पक्राउ
१६, कात्तिक काठमाडौँ । सुन्धारा क्षत्रका अधिकांश दोहोरी साझ, डान्स रेष्टुरेन्ट, क्लव तथा होटलहरुबाट हप्ता असुल्दै आएको आरोप लागेका डन बाबु घिसिङ पक्राउ परेका छन् । घिसिङलाई एक दोहरी साँझमा खाएको बिल नतिरी उल्टै संचालकलाई धम्क्याएको उजुरी परेकोले पक्राउ गरिएको महानगरिय प्रहरी बृत्त जनसेवाका प्रमुख डिएसपी बिनोद घिमिरेले बताए । बेलाबेलामा गुण्डागर्दीको आरोपमा पक्राउ परी छुट्दै आएका घिसिङ चेलीबेटी बेचविखन र हतियारको मुद्दामा पनि पक्राउ…विस्तृत समाचार »
सरकार कहाँ छ ? बजारको भाउ यहाँ छ
पूर्णिमा न्यौपाने १६, कात्तिक काठमाडौँ । करीब दुई महिनादेखीे भारतले अघोषित रूपमा गर्दै आएको नाकाबन्दीका कारण यतिवेला जनताको दिनचर्या अत्यन्त कष्टकर बन्दै गएको छ । दैनिक रुपमा भान्सामा प्रयोग हने उपभोग्य वस्तु लगाएत अन्यमा सामाग्रीमा पनि अत्यधिक मात्रामा कालोबजारी बढेको छ । बिक्रेताहरुले मनपरी मूल्यमा उपभोग्य वस्तु बिक्री गरीरहेको हुँदासमेत सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्न नसकेको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् । चामल, दाल, नुन,चिनी, खाने तेल,…विस्तृत समाचार »
​एकाबिहानै प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि विरगञ्ज नाका खुल्यो
१६ कात्तिक माठमाडौ । लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेता कार्यकर्ताले अवरुद्ध गरेको वीरगन्ज–रक्सौल नाका सोमबार बिहानदेखि खुल्ला भएको छ । वीरगन्जको मितेरीपुलमा धर्ना बसेका मोर्चाका नेता कार्यकर्ताहरुलाई हस्तक्षेप गरी प्रहरीले अवरुद्ध नाका खुल्ला गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा र सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा कार्यालय पर्साबाट खटेका प्रहरी टोलीले बिहान करिब ४ बजेको समयमा धर्नास्थलमा हस्तक्षेप गरी नाका खुल्ला गराएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ ।…विस्तृत समाचार »
रि-रुट गरिएका कन्टेनर समेत रोक्यो भारतले
१६ कात्तिक, झापा । नेपाल आउन नाका परिवर्तन गरेर पूर्व पुगेका मालवाहक कन्टेनरलाई पनि भारतीय सीमा सुरक्षा बलले रोकेको छ। मधेस केन्द्रित दलको आन्दोलनका कारण अन्य नाकाबाट आउन नसकेका कन्टेनर बाटो परिवर्तन गरेर काँकडभिट्टा हुँदै ल्याउन लागिएको थियो। मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाका प्रमुख भन्सार अधिकृत भीम अधिकारीका अनुसार बाटो तथा नाका परिवर्तन गरेर आएका मालवाहक कन्टेनरलाई समेत भारतीय सीमा सुरक्षा बल ९एसएसबी० ले भारतपट्टि नै…विस्तृत समाचार »
माओबादी आन्दोलन बिर्सजनः बधाई की समवेदना ?
१५ कार्तिक २०७२
–मोहन बस्याल नन्द किशोर पुन पासांगका नामले चिनिने एमाओबादीका एक नेता नन्द बहादुर पुन मुलुकको उपराष्ट्रपतिमा चयन भएपछि अहिले बधाईको ओईरो छ । उनीसंग खिचिएका तस्बिर पोष्ट गर्नेको फेसबुकमा ताँती छ । एक जना युवा नेता उपराष्ट्रपतिमा चयन हुँदै गर्दा मलाई चै यो समय बधाई दिनेकी समवेदना प्रकट गर्ने समय हो छुट्याउन मुस्किल परि रहेको छ । माओबादीले संचालन गरेको ससस्त्र संघर्षलाई उत्कर्षमा पुर्याउन उनको…विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 1208 1209 1210 1211 1212 Older Last ›